Google wuxuu aasayaa Warshadaha SEO | Martech Zone
Monday, July 23, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan qoray boostada, SEO waa dhintay, dib bishii Abriil. Weli waan taaganahay boostadaas fact xaqiiqdii, hadda in ka badan sidii hore. Ujeedada boostada ma aheyn in lagu weeraro istiraatiijiyadda suuq geynta ee internetka raadinta qaab istiraatiijiyad wax ku ool ah, ujeedku wuxuu ahaa in lagu kaxeeyo suuqleyda inay ka weeciyaan feejignaantooda xeeladaha caanka ah ee la xiriira isku habeynta mashiinka raadinta iyo dadaallada suuqgeynta waxyaabaha ku habboon
Kuwa idinka mid ah ee aan aqoon istiraatiijiyadda SEO, hagaajinta goobta ayaa isku dhafan xeelado dhowr ah:
Ku darista a nidaamka maamulka content Taasi waxay u soo bandhigaysaa mawduucaaga si fiican mashiinnada raadinta
Naqshadaynta darajooyinka goobta iyo hagidda si nuxurkaaga loogu soo bandhigo siday u kala horeeyaan.
Qorista iyo dhiirrigelinta waxyaabaha soo jiidashada leh si loo ilaaliyo waxyaabaha boggaaga ka kooban dhowaa, soo noqnoqda oo khuseeya.
Adeegsiga ereyada muhiimka ah si wax ku ool ah si loo hubiyo inaad isticmaaleyso isla ereyada muhiimka ah iyo jumladaha ku jira waxyaabahaaga sida kuwa raadinaya warshadahaaga, wax soo saarkaaga ama adeegyadaada.
In kasta oo waxyaabihii hore dhammaantood ay hubiyaan in bartaadu ay qaab wanaagsan ku jirto, wakaaladaha SEO waxay u muuqdeen inay ka talaabeen soohdimahooda kana shaqeeyeen kor u qaadista goobaha, iyagoo ku daraya qorshayaasha isku xidhka, adeegyada buugga iyo shabakadaha daabacaadda… dhammaantood iyadoo aan la shaacin. Si kale haddii loo dhigo… dib u xirid.
Shirkadaha iyo hay'adaha aan rabin inay wax khiyaaneeyaan, dib u xirida waxay u noqotay madax xanuun aad u weyn. Hay'ad caadi ah tartami kari waayey iyada oo shirkad maal galisay lacago badan oo doolar ah qorshayaasha dib u noqoshada ee wakaaladaha SEO. Laakiin dakhliga la xidhiidha dib-u-xiriirku wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan in loo gudbiyo hay'adda ama macmiilka, sidaa darteed dadku waxay fuuleen $ 5 bilyan oo warshad ah sida laga soo xigtay Forrester.
Algorithm Google ee Panda isbeddelku wuxuu bilaabay dagaalka, kala-bixinta bogagga habeenkii oo si ballaadhan u ballaadhiyey si loo qabto natiijooyinka mashiinka raadinta ee dheeraadka ah. Google Penguin ayaa ku xigay, kuna darista saameyn bulsheed aad iyo aad iyo xitaa dib u riixida boggaga si aad ah loogu habeeyay keywords. In kasta oo horumarkani uu horumariyay tayada natiijada mashiinka raadinta, haddana weli ma aysan weerarin arrinta dhabta ah: dib u xirid.
Google waxay farriimo sidan oo kale ah u dirtay shirkadaha laga yaabo inay wax ku darayaan xiriiriyeyaal aan dabiici ahayn:
Tani waa helitaan cabsi leh. Mid ka mid ah macaamiisheenna ayaa dhab ahaantii shaqada ka eryay hay'ad SEO ah oo hore markii ay ogaadeen inay dib u laabayaan. Laakiin waxyeelada waa la sameeyaa waana goor dambe. Sidee ayey dib ugu laaban karaan gadaal iyagoo ka saari kara xiriiriyeyaasha? Waxaannu tiriney in kabadan kun oo hadhay… iyo bogag, shabakado iyo cinwaanno aanan marin u lahayn! Google wuxuu ka hadlayaa malaha ku darida nooc ka mid ah qalabka disavow halkaas oo aad asal ahaan booliis ka dhigan kartid xiriiriyeyaashaada shabakadaha dhexdooda.
Matt Cutts, oo gacanta ku haya tayada iyo howlaha spam ee Google isla markaana baraha bulshada kula jira adeegsadayaashooda ayaa sheegay in shirkadaha waxaa laga yaabaa inaanay isla markiiba ka jawaabin ama ka falceliso warbixinta. Ma hubo inay taasi caddeysay arrinta ama ay ku darsatay jahwareer dheeri ah… laakiin gunta ayaa u muuqata sida maalinta oo kale. Google ugu dambeyntii waa dhab inay ka takhalusto warshadaha SEO.
Haddii wakaaladdaada SEO ay tahay dib u xirid, ma aha si buuxda sheegidda xiriiriyeyaashaas, iyo wax soo saar xiriiriyeyaal aan dabiici ahayn iyadoo la raacayo shuruudaha Google, waxaad u baahan tahay inaad si deg deg ah u joojiso qandaraaskaas oo xitaa aad ka codsato inay ka noqdaan waxyeellada ay u geysaneysay. Waxaad halis galinaysaa shirkadaada.
Tags: warshadaha mashiinka raadintaayna search engineseo dhimanayawarshadaha seoseo waa dhimatay
Jul 26, 2012 markay tahay 5:58 PM
Maxay tani uga dhigan tahay dhammaan dadka hadda ku takhasusay SEO?
Jul 27, 2012 markay ahayd 2:32 AM
Waxyaabaha ayaa ah intee ayaa saxda ah "SEO Specialists"
Jul 31, 2012 markay ahayd 1:28 AM
@ facebook-100003109495960: disqus nasiib daro, inbadan oo takhasus leh SEO waxay xadiday baaxada fahamkooda sida kaliya ee algorithms u shaqeeyeen iyo sida loo darajeeyo goob. Waxay u baahan doontaa iyaga inay dhisaan faham wanaagsan oo ku saabsan suuq-geynta iyo istaraatiijiyadaha bulshada si ay u noolaadaan. Waxaan u maleynayaa inay wax weyn u noqon doonto warshadaha… laakiin waxay tuuri doontaa shirkado badan!
Tani waa run. Heerarka Google waxay ka dhigtay xukunka dahabiga ah “content is king” mid run ah. Iyagu way caqli badan yihiin hadda waxayna raadinayaan waxyaabo tayo leh oo kaliya maahan SEO. Taas oo ah mid aad u dhib badan, dhab ahaantii sababtoo ah hadda kuwa ku jira warbaahinta bulshada waa inay bartaan suuqgeynta sidoo kale.
Jul 27, 2012 markay ahayd 2:43 AM
Boostada weyn Doug 🙂 Ka dib markaan arkay cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Google iyo sida furan ee Google uga hadlayo SEO si looga fogaado jahwareerka dadka SEO uma maleynayo "Google wuxuu cabayaa warshadaha SEO". Google waxay dooneysaa inay siiso natiijooyin wanaagsan isticmaalaha. Taas waxay u doonayaan "Dadka SEO ka fiican". Way is beddeleysaa. Hadda maahan wax ku saabsan abuurista backlinks oo leh ereyga muhiimka ah ee saxda ah sida qoraalka barroosinka (Penguin). SEO wuxuu noqday isku dhafka calaamadaha kala duwan oo ay ku jiraan bulshada.
Jul 27, 2012 markay ahayd 5:56 AM
Seo ma dhiman karo, laakiin sida ku xusan cusbooneysiinta cusub google wuxuu isbedel ku sameeyay dhismaha xiriiriye. Google wuxuu waqtigiisa ku cusbooneysiiyaa algorithmkiisa isticmaalka anshax darrada ah ee seo in ka badan ka fiicnaanta bogagga shabakadaha d d.
Seo hadda way ka sahlan tahay isku darka saamaynta bulshada.
Apr 16, 2013 at 11: 29 AM
Ku dhowaad dhimashadii se laakiin kaliya kuwa aan dib ugu laaban xeeladaha Seo, hat madow madow ayaa hadda gebi ahaanba dhintay maxaa yeelay Penguni 1, 2, 3 ayaa la cusboonaysiiyay oo la beddelay garaafka raadinta google ka dibna ganaaxyada ka mid noqoshada Panda iyo ka saarista natiijooyinka raadinta qallafsan ee google samee way dhimatay laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo loo baahan yahay in la arko sababtoo ah cusboonaysiinta Penguin 4 ayaa soo socota aan aragno waxa dhacaya markaa.
Apr 16, 2013 at 11: 37 AM
Boosto Weyn! Google ayaa hubaal wax ka beddeleysa. Sidee qofku ula socon karaa dhammaan isbeddeladan?
Apr 16, 2013 at 12: 12 PM
Habka ugu fudud ayaa ah inaad joojiso inaad diiradda saarto SEO oo aad diiradda saarto qoraalka, wadaagista iyo dhiirrigelinta waxyaabaha waaweyn!
Apr 21, 2013 at 5: 56 PM
Taasi waa run Doug! Waad ku mahadsantahay jawaabtaada!
Calaamadee @ Ka Dhig iyaga Guji
Agoosto 11, 2013 saacaddu markay ahayd 11:04 PM
Waxaan arkaa shirkado badan oo seo ah oo si ba'an u isku dayaya inay ku dhex milmaan warbaahinta bulshada ama shirkadaha suuq-geynta waxyaabaha ku jira iyagoo isku dayaya inay ilaashadaan ganacsigooda. Dhibaatadu waxay tahay kuwani waa gabi ahaanba noocyo shakhsiyadeed oo kala duwan iyo noocyo xirfadeed taas oo aanan filaynin in teknoolojiyada seo ay leedahay.